အီးမေးလ်ပို့ရန် & Messaging ကို သိကောင်းစရာများ & Tricks
အသံ script များနှင့်အံ့မခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအသုံးပြုမှုကို Windows Live Mail ကို, Window မေးလ်နှင့် Outlook Express ကိုများအတွက်ခေတ်မီစာရေးကိရိယာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်အများဆုံးအချို့ အထင်ကြီးစာရေးကိရိယာ တစ်ခုအံ့သြစရာနောက်ခံပုံပေမယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာသင်ကယူနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုသို့မဟုတ်သင်ဆွဲငင်နေတဲ့ပန်းချီ, - - သင်ထည့်သွင်းရန်ပုံတစ်ပုံရှိသည်ဆိုလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောစာရေးကိရိယာကိုသိသိသာသာရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လက်ရှိသာရေးသားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းစကားများအတွက်အသုံးပြုရန်နိုင်ပါသည်, သို့သော်လည်းလွယ်ကူ နေတဲ့စာရေးကိရိယာအဖြစ်သိမ်းဆည်း အကြာတွင်ပြန်သုံးဘို့။
Windows Live Mail ကို, Window မေးလ်သို့မဟုတ် Outlook Express ကိုအတူအီးမေးလ်တစ်ခုနောက်ခံပုံရိပ် Add
ယင်းမှပုံရိပ်တစ်ခုလျှောက်ထားရန် အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျ၏နောက်ခံ သငျသညျ Windows Live Mail ကို, Window မေးလ်သို့မဟုတ်အတွက်ရေးသားနေကြသည် Outlook Express :
>> အဆင့် Screenshot ဗျူဟာလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့် (Outlook Express ကိုသုံးပြီး)
အတူ Start က HTML format နဲ့သစ်တစ်ခုသတင်းစကား ။
| Format ကို Select လုပ်ပါ နောက်ခံသမိုင်း | Image ကို ... (သို့မဟုတ် Format ကို ရုပ်ပုံ | | နောက်ခံ မီနူးကနေ ... ) ။
လိုချင်သော image file ကိုရွေးရန် Browse ကို ... button ကိုသုံးပါ။
ထပ်ကနေ Image ကိုရပ်တန့်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လို Windows Live Mail ကို , ကို Windows Mail ကို နှင့် Outlook Express ကိုအလိုအလျှောက်လက်ျာနှင့်အောက်သို့ဖို့ image ကိုပြန်လုပ်ပါကသင်သည်နိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်အရင်းအမြစ်ကိုတည်းဖြတ်ဖွငျ့ဤတားဆီး ။
Google ကပြက္ခဒိန်တွင်ပုံမှန်သတိပေးချက် Specify လုပ်နည်း
Mozilla Thunderbird ကို Safe Mode ကိုစတင်
ဇူလိုင်လ, E-Card ကိုဆိုဒ်များ 2018 24 အကြိုက်ဆုံး 4th
2018 အတွက်ထိပ်တန်း 12 အခမဲ့ Windows ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန် Programs ကို
IncrediMail တစ်ခုအီးမေးမှနောက်ခံအသံ Add
သင်ကသူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းမပြုမီဖိုင်များ Compress သငျ့ပါအဘယ်ကြောင့်
Web ပေါ်ရှိ Outlook နဲ့ Mail ကိုတစ်ဦးမူကြမ်း Continue လုပ်နည်း
Mail Print 1.3 - အလိုအလျောက်အီးမေးလ်ပုံနှိပ် Tool ကို
Web Design နဲ့ HTML ဖန်တီးမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ Learn
Marketing ကိုမိုဘိုင်း Applications ကိုအပေါ်ထိပ်ဆုံး 10 သိကောင်းစရာများ
အမှုဆောင်အရာရှိ - Linux ကိုစစ်ဌာနချုပ် - Unix စစ်ဌာနချုပ်
Excel ကိုဖွင့် char နှင့်ကုတ် Functions များ
သငျသညျကို Nintendo 3DS ဒါမှမဟုတ်ကို Nintendo 2DS Buy သငျ့သလော
တစ်ဦးက Network Router ကိုဘယ်လိုအများကြီးပါဝါလောင်ပါသလား?
အခြားရွေးချယ်စရာ PageWide နှင့် PrecisionCore Printhead ပုံနှိပ်
Apps ကပရန်တစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
Blu-ray disc ကစားသမား Connections ကိုဘယျလိုအမြိုးအစားဖူးသလား?
IMovie 11 Timeline - stacked သို့မဟုတ် Linear Timeline
AIFF, AIF နှင့် AIFC ဖိုင်များ, ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကိုဖွင့်နှင့်ပြောင်းကိုဘယ်လို
အခုတော့မိသားစု Tree: တစ်ဦးကအခမဲ့နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာပြည်သူ့ဆိုက်ကို
D3dx10_35.dll တွေ့သည်သို့မဟုတ်လက်လွတ်မအမှား Fix ရန်ကဘယ်လို
မိဘများအများအတွက် Instagram ကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ
သင့် Outlook နဲ့အီးမေးလ်များလွယ်ကူသိုလှောင်မှုသည်ရိုးရိုးစာသားပြောင်း
Yahoo! အတွက် On-Demand စကားဝှက်တွေနဲ့ဖြေရှင်းနည်းလုပ်နည်း စာပို့
Photoshop နဲ့ Element တွေကိုအခမဲ့မြို့ပတ်နယ်စပ်ရေးရာ Shape
တစ်ဦး Scan ကို Tool ကိုကဘာလဲ?
CES 2005 ၏အကောင်းဆုံး